Dagaal u dhaxeeya Shabaab iyo ciidamada Koonfur Galbeed oo ka socda duleedka Baydhabo – STAR FM SOMALIA
Sida ay sheegayaan wararka saaka inaga soo gaaraya deegaanka Goofgaduud Buurey oo ka tirsan Gobolka Baay, kuna yaalla duleedka Degmada Baydhabo ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa Shabaab ayaa dagaal wuxuu ku dhexmarayaa deegaankaasi.
Dagaalkan ayaa yimid, kadib markii dagaalyahano ka tirsan Xoogaga Shabaab weerar ay ku soo qaadeen fariisin ciidamada Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka.
Goofgaduud buurey xalay waxaa ka maqnaa Isgaarsiinta waxaana jirtay wararka sheegaya in Shabaab weerar ay ku yihiin deegaankaasi, balse ciidamada Koonfur Galbeed ayaa galay feejignaan adag.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay dagaalka inuu hada socdo, islamarkaana aysan garan karin Khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi.
Shabaab ayaa baraha Internet-ka ee ay wararka ku faafiyaan waxa ay ku sheegteen in dagaal ay kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Goofgaduud buurey ee Gobolka Baay.
Saraakiisha ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay qaban qaabinayaan sidii ciidamo xoojin ah loogu diri lahaa deegaanka oo qorshaha uu yahay in Shabaab aysan qabsan.
Ilaa hada dagaalka wuu ka socdaa deegaanka Goofgaduud buurey, lamana oga cida sida rasmiga ah gacanta ugu haysa deegaankaan, inkastoo Shabaab ay sheeganayaan.